Meelaha ragga dhaqsi uga kacsadaan wax ka baro ee adeegso….. - iftineducation.com
Meelaha ragga dhaqsi uga kacsadaan wax ka baro ee adeegso…..
iftineducation.com – Goobo gaar ah oo muhiim u ah ragga ayaa jira oo ay ka heleen dareenka kacsiga waxaana muhiim ah in haweenka ogaato.
5- salaaxista qooraha
Sida haweenka oo kale ,ragga waxa ay jecel yihiin in xaaskooda ka maqlaan erayo macaan oo jaceyl ah , iyo cod ham-ham ah oo macaan oo aad u hoseeya .
Malabyaroowga:In aad u jaqdo awood iyo kacsi ayuu ka helayaa hadaad tahay dadka amainsan in ay xaaraan tahay in malabayaroowga laga dhuuqo u samee u in aad salaaxdo oo gacanta aad geeyso ilaa iyo qooraha hoostooda., nimanka aad waxay ugu kacsadaan marka ay arkaan naag dabo weyn ama naaso waaweyn leh marka ay hortiisa soo marto, marka walaaleey haddii aad leedahay waxa ninkaaga kiciyo ku dadaal inaad ugu raaxaysid aad soo jiidatid.
Ma kacsado hadaan la ii leefayn ninkaygana waa iga diiday?
Astaamaha lagu garto xiliga dumarku kacsiga tabcan la yihiin waxka baro….